မြန်မာယူနီကုဒ်စံစနစ်ကို ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြောင်းလဲသုံးစွဲကြပါစို့ ~ Myanmar Online News
မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် ကွန်ပျူတာများတွင် ယူနီကုဒ်စံစနစ်သည် မူလအတိုင်း အသင့်ပါရှိသော်လည်း တင်သွင်းရောင်းချ သူများနှင့် ဆိုင်များမှ ပြောင်းလဲထားခြင်းကြောင့် ယူနီကုဒ်မဟုတ်သောစနစ်များ ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ ယူနီကုဒ်ကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲသုံးစွဲမည်ဆိုပါက အဓိကနှစ်ချက်ဖြစ်သည့် ဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ်ကို ပြောင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဖောင့်ဆိုသည်မှာ စာသားများကိုပြသောအပိုင်းဖြစ်ပြီး ကီးဘုတ်ဆိုသည်မှာ စာသားများကိုရိုက်သောအပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာယူနီကုဒ်စံစနစ်ကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားအလိုက် နည်းလမ်းများကို အကျဉ်းချုပ်စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
အမျိုးအစားနှင့် မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲရမည့်ပုံစံ ကွဲပြားနိုင် အန်းဒရိုက် ၄.၄ (Android 4.4) နှင့်အထက် မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် ယူနီကုဒ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အမျိုးအစားနှင့် မော်ဒယ် ပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲရမည့်ပုံစံ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
ပထမနည်းလမ်းမှာ ဆက်တင်(Settings) အောက်ရှိ ဘာသာ စကား (Language) ကို English (US) နှင့် English (UK) သို့မဟုတ် မြန်မာ(Unicode) သို့ ပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယနည်းလမ်းမှာ သီးမ်(Theme) ကို မူလသို့ ပြန်လည်ပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ရှောင်းမီ (Xiaomi) ဖုန်း မော်ဒယ်ချို့တွင် သီးမ်(Theme) မူလသို့ ပြန်လည်ပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် ယူနီကုဒ်ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တတိယနည်းလမ်းမှာ ဇက်ဖောင့် (zFont)နှင့် အိုင်ဖောင့် (iFont)ကဲ့သို့သော ဖောင့်အဲ့ပ်(Font App)တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ ဖောင့်စတိုင် (Font Style) ပြောင်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်မရပါက မိမိဖုန်းသည် ရူ့ထ်(root) ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် ရူ့ထ်ပြုလုပ်၍ ပြန်လည်ဖောင့်အမှန်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချို့ဖုန်းများတွင်မူ ဖန်းဝဲ (Firmware) ပြန်၍ ပြောင်းပေး ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အထက်ပါနည်းလမ်းအဆင့်ဆင့်ကို မိမိကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရန် မကျွမ်းကျင်ပါက အခြားကျွမ်းကျင်သူ သို့မဟုတ် ဖုန်းဆိုင်တစ်ခုခုတွင် အကူအညီရယူပါ။
အန်းဒရိုက်ဖုန်းတွင် ကီးဘုတ်ကို ဂျီဘုတ်၊ ပုဂံ၊ ဖရိုးဇဲန် အစရှိသော (Gboard, Bagan, Frozen etc.) ယူနီကုဒ်စံကို လိုက်နာထားသော ကီးဘုတ်အဲ့ပ် (keyboard app) များကို မိမိနှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အချို့ ကီးဘုတ်များတွင် ကီးဘုတ်အဲ့ပ်ကိုဖွင့်၍ ယူနီကုဒ်ကို ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အန်းဒရိုက် ၄.၄(Android 4.4) အောက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်မူ ယူနီကုဒ်ကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။ ယူနီကုဒ်စာများကိုဖတ်ရှုနိုင်ရန် အမ်ယူအက်ခ်စ် ကွန်ဗာတာအဲ့ပ် (MUX Converter App)ကဲ့သို့ ကွန်ဗာတာအဲ့ပ်များကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အမ်ယူအက်ခ်စ်ကွန်ဗာတာအဲ့ပ်ကို အသုံးပြု၍ မိမိဖုန်းတွင်ရှိသော လိပ်စာအမည်များ (Contacts)ကို ယူနီကုဒ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
အိုင်ဖုန်း (iPhone)များကို ယူနီကုဒ်ပြောင်းလိုပါက ဆက်တင် (Settings)၏ အထွေထွေ (General) အောက်တွင် ယခင်ကထည့်ထားသော ယူနီကုဒ်မဟုတ်သည့် ဖောင့်ပရိုဖိုင် (Font profile)ကို ပြန်လည်ဖယ်ရှားပေးရပေမည်။ အိုင်အိုအက်စ် ၁၀ (iOS 10) နှင့် အထက်တွင် မူလ (built-in) မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်ပါရှိသော်လည်း အိုင်အိုအက်စ် ၉ နှင့် အောက်တွင် မြန်မာ ၃ နှင့် ပြည်ထောင်စုကဲ့သို့သော ယူနီကုဒ်ဖောင့်ပရိုဖိုင်ကို ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ အိုင်အိုအက်စ် ၁၃ အတွက် စနစ်ထဲတွင်ပါသော ကီးဘုတ်ကို အရန်သင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသော်လည်း ၎င်းထက်နိမ့်ပါက တီတီကီးဘုတ်အဲ့ပ်(TT Keyboard App)ကဲ့သို့သော ကီးဘုတ်အဲ့ပ်ကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြောင်းအဲ့ပ် (Pyaung App) ကိုအသုံးပြု၍ မိမိအိုင်ဖုန်းတွင်ရှိသော လိပ်စာအမည်များ (Contacts) ကို ယူနီကုဒ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက် မိမိကွန်ပျူတာသည်Windows 10 and Office 2013 နှင့် အထက်ဖြစ်ပါက မူလ (built-in) ပါဝင်သောဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ်ကို အရန်သင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထပ်မံ၍ ပြည်ထောင်စုဖောင့် ၂.၅ သို့မဟုတ် မိမိနှစ်သက်ရာ မည့်သည့်ယူနီကုဒ်ဖောင့်ကိုမဆိုလည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းထက် Windows နှင့် Office ဗားရှင်းနိမ့်ပါက ပြည်ထောင်စုဖောင့် ၁.၈ နှင့် ကီးမက်ဂျစ် (Key Magic) သို့မဟုတ် ကီးမဲန်(KeyMan) ကီးဘုတ်များကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Mac ကွန်ပျူတာများတွင် မူလ (built-in) ပါဝင်သောဖောင့်နှင့် ကီးမက်ဂျစ် သို့မဟုတ် ကီးမဲန် (KeyMagic or KeyMan) ကီးဘုတ်တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။လင်းနက်စ်(Linux)နှင့် လီဘရယ်အော့ဖစ် (LibreOffice) ကဲ့သို့သော Open Source ဆော့ဝဲများတွင်လည်း မူလ (built-in) ပါဝင်သော ဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ်များကို အရန်သင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ယခင်က ရိုက်ခဲ့သော အချက်အလက်များကို ယူနီကုဒ် ပြောင်းလဲလိုပါက ပုရပိုက်(Parabaik)၊ ယုန် (Rabbit)၊ ယူနီကွန် (unicon.mitcloud.com) နှင့် အလားတူ ကွန်ဗာတာ (Converter)များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ယူနီကုဒ်အကူးအပြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သော ဆော့ဝဲများရယူရန်နှင့် သိလိုသောအချက်အလက် အပြည့်အစုံကို အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ရန် www.UnicodeToday.org ကိုသွားရောက်ပါ။ ပြောင်းလဲရာတွင် အခက်အခဲ တွေ့ကြုံခဲ့ပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ ဖုန်း ၀၉-၄၅၅ ၇၃၆ ၉၉၉(Hotline)သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင် ပါသည်။ ထိုနံပါတ်သို့ ဗိုင်ဘာ(Viber) ဖြင့် ဆက်သွယ်၍လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ တာဝန်ကျနည်းပညာရှင်များမှ ကူညီပေးသွားပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် အမ်ယူအေ (Myanmar Unicode Area, MUA)ကဲ့သို့သော ဖေ့ဘုတ်ဂရု(Facebook Group) တို့တွင် မေးမြန်း၍လည်း အကူညီရယူနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ယူနီဘော့ (UniBot)ဟုခေါ်သော မက်စင်ဂျာ (Messenger) တွင် မိမိဖုန်း‌အမျိုးစားနှင့် မော်ဒယ်ကိုရိုက်ပို့၍ မေးမြန်းပါက လိုအပ်သည့်အချက်လက်များကို အလိုအလျောက် ပြန်လည်ဖြေကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
#Myanmar_Online_News #မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် #ယူနီကုဒ်
မွနျမာယူနီကုဒျစံစနဈကို ပွညျသူတဈရပျလုံး တဈပွိုငျနကျတညျး ပွောငျးလဲသုံးစှဲကွပါစို့
မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ ယူနီကုဒျစံစနဈသို့ ကူးပွောငျးရာတှငျ အမြားပွညျသူအားလုံး တဈပွိုငျနကျတညျး ပွောငျးလဲသုံးစှဲ နိုငျမှသာ အောငျမွငျလာမညျဖွဈပါသညျ။
မိုဘိုငျးဖုနျးမြားနှငျ့ ကှနျပြူတာမြားတှငျ ယူနီကုဒျစံစနဈသညျ မူလအတိုငျး အသငျ့ပါရှိသျောလညျး တငျသှငျးရောငျးခြ သူမြားနှငျ့ ဆိုငျမြားမှ ပွောငျးလဲထားခွငျးကွောငျ့ ယူနီကုဒျမဟုတျသောစနဈမြား ဖွဈနနေိုငျပါသညျ။ ယူနီကုဒျကို ပွနျလညျပွောငျးလဲသုံးစှဲမညျဆိုပါက အဓိကနှဈခကျြဖွဈသညျ့ ဖောငျ့နှငျ့ ကီးဘုတျကို ပွောငျးပေးရနျလိုအပျပါသညျ။ ဖောငျ့ဆိုသညျမှာ စာသားမြားကိုပွသောအပိုငျးဖွဈပွီး ကီးဘုတျဆိုသညျမှာ စာသားမြားကိုရိုကျသောအပိုငျး ဖွဈပါသညျ။
မွနျမာယူနီကုဒျစံစနဈကို အဆငျပွခြေောမှစှေ့ာ ပွောငျးလဲသုံးစှဲနိုငျရနျအတှကျ မိုဘိုငျးဖုနျးနှငျ့ ကှနျပြူတာ အမြိုးအစားအလိုကျ နညျးလမျးမြားကို အကဉျြးခြုပျစုစညျးတငျပွထားပါသညျ။
အမြိုးအစားနှငျ့ မျောဒယျပျေါမူတညျ၍ ပွောငျးလဲရမညျ့ပုံစံ ကှဲပွားနိုငျ အနျးဒရိုကျ ၄.၄ (Android 4.4) နှငျ့အထကျ မိုဘိုငျးဖုနျးမြားတှငျ ယူနီကုဒျအသုံးပွုနိုငျပွီး အမြိုးအစားနှငျ့ မျောဒယျ ပျေါမူတညျ၍ ပွောငျးလဲရမညျ့ပုံစံ ကှဲပွားနိုငျပါသညျ။
ပထမနညျးလမျးမှာ ဆကျတငျ(Settings) အောကျရှိ ဘာသာ စကား (Language) ကို English (US) နှငျ့ English (UK) သို့မဟုတျ မွနျမာ(Unicode) သို့ ပွောငျးခွငျးဖွဈပါသညျ။ ဒုတိယနညျးလမျးမှာ သီးမျ(Theme) ကို မူလသို့ ပွနျလညျပွောငျးပေးခွငျးဖွဈပါသညျ။ ဥပမာ ရှောငျးမီ (Xiaomi) ဖုနျး မျောဒယျခြို့တှငျ သီးမျ(Theme) မူလသို့ ပွနျလညျပွောငျးပေးခွငျးဖွငျ့ ယူနီကုဒျကို ပွောငျးလဲအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ တတိယနညျးလမျးမှာ ဇကျဖောငျ့ (zFont)နှငျ့ အိုငျဖောငျ့ (iFont)ကဲ့သို့သော ဖောငျ့အဲ့ပျ(Font App)တဈခုခုကို အသုံးပွု၍ ဖောငျ့စတိုငျ (Font Style) ပွောငျးခွငျး ဖွဈပါသညျ။ အထကျပါနညျးလမျးမြားဖွငျ့မရပါက မိမိဖုနျးသညျ ရူ့ထျ(root) ပွုလုပျထားခွငျးဖွဈနိုငျသညျ့အတှကျ ရူ့ထျပွုလုပျ၍ ပွနျလညျဖောငျ့အမှနျသှငျးရနျ လိုအပျပါသညျ။ အခြို့ဖုနျးမြားတှငျမူ ဖနျးဝဲ (Firmware) ပွနျ၍ ပွောငျးပေး ရနျ လိုအပျပါသညျ။
အထကျပါနညျးလမျးအဆငျ့ဆငျ့ကို မိမိကိုယျတိုငျဆောငျရှကျရနျ မကြှမျးကငျြပါက အခွားကြှမျးကငျြသူ သို့မဟုတျ ဖုနျးဆိုငျတဈခုခုတှငျ အကူအညီရယူပါ။
အနျးဒရိုကျဖုနျးတှငျ ကီးဘုတျကို ဂြီဘုတျ၊ ပုဂံ၊ ဖရိုးဇဲနျ အစရှိသော (Gboard, Bagan, Frozen etc.) ယူနီကုဒျစံကို လိုကျနာထားသော ကီးဘုတျအဲ့ပျ (keyboard app) မြားကို မိမိနှဈသကျရာ ရှေးခယျြအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ အခြို့ ကီးဘုတျမြားတှငျ ကီးဘုတျအဲ့ပျကိုဖှငျ့၍ ယူနီကုဒျကို ရှေးခယျြရနျလိုအပျပါသညျ။ အနျးဒရိုကျ ၄.၄(Android 4.4) အောကျဖွဈခဲ့လြှငျမူ ယူနီကုဒျကို တိုကျရိုကျအသုံးပွု၍ မရနိုငျပါ။ ယူနီကုဒျစာမြားကိုဖတျရှုနိုငျရနျ အမျယူအကျချဈ ကှနျဗာတာအဲ့ပျ (MUX Converter App)ကဲ့သို့ ကှနျဗာတာအဲ့ပျမြားကို အသုံးပွုရနျ လိုအပျပါသညျ။ ထို့အပွငျ အမျယူအကျချဈကှနျဗာတာအဲ့ပျကို အသုံးပွု၍ မိမိဖုနျးတှငျရှိသော လိပျစာအမညျမြား (Contacts)ကို ယူနီကုဒျသို့ ပွောငျးလဲနိုငျပါသညျ။
အိုငျဖုနျး (iPhone)မြားကို ယူနီကုဒျပွောငျးလိုပါက ဆကျတငျ (Settings)၏ အထှထှေေ (General) အောကျတှငျ ယခငျကထညျ့ထားသော ယူနီကုဒျမဟုတျသညျ့ ဖောငျ့ပရိုဖိုငျ (Font profile)ကို ပွနျလညျဖယျရှားပေးရပမေညျ။ အိုငျအိုအကျဈ ၁၀ (iOS 10) နှငျ့ အထကျတှငျ မူလ (built-in) မွနျမာယူနီကုဒျဖောငျ့ပါရှိသျောလညျး အိုငျအိုအကျဈ ၉ နှငျ့ အောကျတှငျ မွနျမာ ၃ နှငျ့ ပွညျထောငျစုကဲ့သို့သော ယူနီကုဒျဖောငျ့ပရိုဖိုငျကို ထညျ့သှငျးရနျလိုအပျပါသညျ။ အိုငျအိုအကျဈ ၁၃ အတှကျ စနဈထဲတှငျပါသော ကီးဘုတျကို အရနျသငျ့အသုံးပွုနိုငျပါသျောလညျး ၎င်းငျးထကျနိမျ့ပါက တီတီကီးဘုတျအဲ့ပျ(TT Keyboard App)ကဲ့သို့သော ကီးဘုတျအဲ့ပျကို ထညျ့သှငျးရနျ လိုအပျပါသညျ။ ထို့အပွငျ ပွောငျးအဲ့ပျ (Pyaung App) ကိုအသုံးပွု၍ မိမိအိုငျဖုနျးတှငျရှိသော လိပျစာအမညျမြား (Contacts) ကို ယူနီကုဒျသို့ ပွောငျးလဲနိုငျပါသညျ။
ကှနျပြူတာအသုံးပွုသူမြားအတှကျ မိမိကှနျပြူတာသညျWindows 10 and Office 2013 နှငျ့ အထကျဖွဈပါက မူလ (built-in) ပါဝငျသောဖောငျ့နှငျ့ ကီးဘုတျကို အရနျသငျ့အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ ထပျမံ၍ ပွညျထောငျစုဖောငျ့ ၂.၅ သို့မဟုတျ မိမိနှဈသကျရာ မညျ့သညျ့ယူနီကုဒျဖောငျ့ကိုမဆိုလညျး ထညျ့သှငျးအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ ၎င်းငျးထကျ Windows နှငျ့ Office ဗားရှငျးနိမျ့ပါက ပွညျထောငျစုဖောငျ့ ၁.၈ နှငျ့ ကီးမကျဂဈြ (Key Magic) သို့မဟုတျ ကီးမဲနျ(KeyMan) ကီးဘုတျမြားကို ထညျ့သှငျး အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ Mac ကှနျပြူတာမြားတှငျ မူလ (built-in) ပါဝငျသောဖောငျ့နှငျ့ ကီးမကျဂဈြ သို့မဟုတျ ကီးမဲနျ (KeyMagic or KeyMan) ကီးဘုတျတို့ကို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။လငျးနကျဈ(Linux)နှငျ့ လီဘရယျအော့ဖဈ (LibreOffice) ကဲ့သို့သော Open Source ဆော့ဝဲမြားတှငျလညျး မူလ (built-in) ပါဝငျသော ဖောငျ့နှငျ့ ကီးဘုတျမြားကို အရနျသငျ့အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
ယခငျက ရိုကျခဲ့သော အခကျြအလကျမြားကို ယူနီကုဒျ ပွောငျးလဲလိုပါက ပုရပိုကျ(Parabaik)၊ ယုနျ (Rabbit)၊ ယူနီကှနျ (unicon.mitcloud.com) နှငျ့ အလားတူ ကှနျဗာတာ (Converter)မြားကို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
ယူနီကုဒျအကူးအပွောငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ လိုအပျသော ဆော့ဝဲမြားရယူရနျနှငျ့ သိလိုသောအခကျြအလကျ အပွညျ့အစုံကို အသေးစိတျလလေ့ာနိုငျရနျ www.UnicodeToday.org ကိုသှားရောကျပါ။ ပွောငျးလဲရာတှငျ အခကျအခဲ တှကွေုံ့ခဲ့ပါက မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာအသငျးခြုပျ၏ ဖုနျး ၀၉-၄၅၅ ၇၃၆ ၉၉၉(Hotline)သို့ ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျ ပါသညျ။ ထိုနံပါတျသို့ ဗိုငျဘာ(Viber) ဖွငျ့ ဆကျသှယျ၍လညျး မေးမွနျးနိုငျပါသညျ။ တာဝနျကနြညျးပညာရှငျမြားမှ ကူညီပေးသှားပါလိမျ့မညျ။ ထို့အပွငျ အမျယူအေ (Myanmar Unicode Area, MUA)ကဲ့သို့သော ဖဘေု့တျဂရု(Facebook Group) တို့တှငျ မေးမွနျး၍လညျး အကူညီရယူနိုငျပါသညျ။ ထို့အပွငျ ယူနီဘော့ (UniBot)ဟုချေါသော မကျစငျဂြာ (Messenger) တှငျ မိမိဖုနျး‌အမြိုးစားနှငျ့ မျောဒယျကိုရိုကျပို့၍ မေးမွနျးပါက လိုအပျသညျ့အခကျြလကျမြားကို အလိုအလြောကျ ပွနျလညျဖွကွေားသှားမညျဖွဈပါသညျ။
#Myanmar_Online_News #မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာအသငျးခြုပျ #ယူနီကုဒျ